"समस्या हैन सोचलाई हल गर्छु!" - Blogs of Sagar Prasai
"समस्या हैन सोचलाई हल गर्छु!"
अलि वर्ष अगाडी, जुन बेला म सँग स्कुटर थिएन, त्यो बेलामा म हिडडुलका लागी पुरै व्हिलचियर प्रयोग गर्थे। एकपल्ट कस्तो भयो भने, मेरो व्हिलचियरको टायर दिन दिनै पन्चर हुन थाल्यो। एकपल्ट बनाएर ल्यायो- भोलि फेरी पन्चर भैसक्थ्यो। पन्चर बनाउँदा बनाउँदा दिक्क भएर- मैले ट्युब पनि फेरेँ। तर पनि पन्चर हुन रोकिएन। त्यसपछि यसरी भएन भनेर, साईकल बनाउने ठाउँको मिस्त्रीको सल्लाहमा राम्रो महंगो टायर फेरे। तर पनि फेरी भोलिपल्टै पन्चर भैहाल्यो। त्यो बेला, व्हिलचियर बनाउन मेरो यति पैसा खर्च हुन्थ्यो कि- मेरो घरका मान्छेहरूले मलाई जिस्काउँथे- तिम्रो व्हिलचियर पनि हात्ति पाले सरह भयो!
त्यसपछि मैले एकदिन आजित भएर- नियमितरूपमा मेरो व्हिलचियर बनाईरहेको साईकल पसले सँग झगडा गरेँ। "यतिका पैसा हाल्दा पनि जहिले पन्चर हुने सामान बेचेर मलाई ठग्ने" भनेर उनीहरू सँग भनाभन गरेँ। त्यहि पसलमा एकजना बुढा मान्छे थिए। उनी आफै कहिले साईकलहरू बनाउँदैन थिए, तर सधैँ त्यहि पसलमा यतिकै बसिरहेका हुन्थे। मैले त्यसरी त्यो पसलमा ठुलो स्वरमा कराएपछि, उनले भने-"सर, ट्युब बनाउने तिर त धेरै लाग्नुभयो। खर्च पनि धेरै गर्नुभयो। तर तपाईले बाटो हेर्नुभएको छ? कस्तो छ तपाईको घर जाने बाटो?"
उनले त्यसो भनेपछि पो म झसँग भएँ। मैले यतिका दिन सम्म व्हिलचियर बनाउने बारे सोच्दा-सोच्दा त्यो के कारणले बिग्रेको हो भनेर सोच्न चाहि भुलेछु। त्यो दिन पो घर फर्कदा बिचार गरे- मेरो कोठा जाने बाटो त खुबै खराब थियो। चुच्चो परेका ढुङ्गा, फालिएका सिसाका टुक्रा त ठाउँ ठाउँमा छदै थियो- त्यसमाथि हिलो र पानी जमेको थियो। अनि के टायर नपड्किओस त मेरो व्हिलचियर को।
त्यसको अलि दिनमा म त्यो ठाउँबाट कोठा नै सरेर नयाँ ठाउँमा गए। त्यहाँको बाटो राम्रो थियो। त्यसपछि मेरो व्हिलचियरको टायर कहिले पन्चर भएन। मेरो समस्या पनि समाधान भयो।
यो घटनालाई म जब जब सम्झन्छु, लुईस हे भन्ने एकजना मान्छेलाई पनि सम्झन्छु। उनले भनेका छन्- "म कहिले समस्याहरूको हल गर्दिन। म बरू मेरो सोचलाई हल गर्छु। अनि समस्याहरू आफै हल हुन्छ।"